LA OGAADAY: Lix xiddig waaweyn oo iska diiday inay ku biraan Real Madrid Taarikhda & Sabata ka dambeeysay? – Gool FM
(Madrid) 22 Sebt 2019. Kooxda Real Madrid ayaa loo arkaa iany tahay mid ka mid ah kooxaha ka sameeyay suuqa kala iibsiga kubadda cagta tariikhda saxiixyada xidigaha waaweyn inta la xasuusto, waxeyna kooxdan reer Spain ay ku guuleystay in mar qura garoonka Santiago Bernabéu ay isugu keento qaar ka mid ah halyeeyada kubadda cagata.
Waxaase sidoo kale jira in kooxda ka dhisan casimada spain ay ku guul dareeysatay inay la saxiixato qaar ka mid ah xidigihii ugu fiicnaa kuabadda cagat xiligii hore iyo kuwa haatan ee muhiimka u ah kooxaha ugu tunka weyn qarda yurub .
Waxaa muqaalkan ku eegi doonaa 6-da xiddig calamiga ah ee iska diiday inay ku biraan kooxda Raal Madrid iyo sababta ka dambeyaya in ay iska diidan dalabka kooxda Los Balancos hadaladii ay qarkood ku bahdileen, iyo xilliyadii ay dhacdooyinkan dhaceen.
Warbxintan oo aad u xiiso badan waxaa soo jeedinaya shaafici Maxamud “Shaafinho” ee fadlan ka daawo muqalka hoose adiga oo oganaaya xiddiga kooxdaada ugu jira.